Bahrain - Israel kuti ive shamwari nhasi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Akasiyana Nhau » Bahrain - Israel kuti ive shamwari nhasi
Bahrain Kuputsa Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Israel Breaking News • nhau • chengetedzo • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Nhumwa dzakabatana dzeUS-Israel dziri kusangana muBahrain nhasi kusaina dzakateedzana zvibvumirano pakati penyika yeIsrael neBahrain, kusanganisira inonzi Joint Communiqué iyo ichaumba zviri pamutemo kudyidzana pakati penyika mbiri idzi.
El Al Flight 973 yakarongerwa kubva kuTel Aviv kwaBen Gurion Airport kuenda kuManama na11.00: 973 mangwanani mune ichave yekutanga-yekutengesa isingamire ndege kubva kuIsrael kuenda kuGulf empire. XNUMX iri zvakare kodhi yenyika kodhi yeBahrain. Iyo imwechete chiratidzo yakashandiswa neAFA.
NeSvondo manheru, nhumwa dzeUS - dzakatungamirwa neMunyori weHaimari, Steven Mnuchin mumiriri weWhite House kumakakatanwa eIsrael nePalestine Avi Berkowitz - vacharamba vachienda kuUnited Arab Emirates kumisangano.
Asi, zvinopesana nemishumo ichangoburwa, vamiriri veIsrael - vachitungamirwa naNational Security Adviser Meir Ben-Shabbat uye Director wekunze Ministry director Alon Ushpiz - havazojoinha vamwe vavo vekuAmerican kuAud Dhabi. Asi, ivo vakagadzirirwa kudzokera kuIsrael neSvondo manheru.
Hofisi yeMutungamiri weHurumende, Acting Director-General, Ronen Peretz vachabatanawo nerwendo urwu, sezvichaitawo director-general vemashumiro mashoma eIsrael neChipiri, nhumwa yepamusoro yeUAE, kusanganisira vaviri makurukota ehurumende, vanotarisirwa kusvika kuIsrael kuzobatana. hurukuro dzakagadzirirwa kuita zvibvumirano zvakajairwa neIsrael zvakasainwa muWashington mwedzi wapfuura.
Gare gare nemusi weSvondo masikati, Israel neBahrain vachasaina mamemorandamu enzwisisiro, kusanganisira "Joint Communiqué pane kumisikidzwa kwehukama, runyararo uye hushamwari hukama."
Hukama hunotarisirwa kuti hunosanganisirawo kushandira pamwe kwekushanya.
Parizvino hazvizivikanwe kuti gwaro iri richaunzwa kudare remakurukota eIsrael uye / kana Knesset kuti ibvumidzwe. Zvinoita sezviri pachena kuti Gweta Gurukota Avichai Mandelblit raizoda kuti chibvumirano chienzaniswe nevashumiri pazvishoma, sezvo chiine zvisungo zvinoverengeka pachikamu cheIsrael.